Lego Star Wars simba rinomutsa rinouya kuApp Store | IPhone nhau
Kana iwe uchida mitambo yeStar Wars, nhau dzakanaka: ndizvozvo! inowanikwa paApp Store Lego Star Wars Simba Rakamuka, zita rinobva pachikamu 7 cheStar Wars umo, sezvatinogona kufungidzira kubva kumusoro waro, protagonists, ngarava uye zvivakwa zvinogadzirwa nezvidimbu zveLego, kusanganisira anonyanya kufadza mavara kubva muchiitiko chekupedzisira: BB-8.
Kunge mamwe mazita ari mu saga, Lego Star Wars: The Force Awakens is a mutambo wevanakidza matiri tichafanirwa kudzokorodza episode 7 yeyakakurumbira saga yakagadzirwa naGeorge Lucas uye iyo muna 2012 yakawanikwa naDisney. Tinogona kutaura kuti mitambo yeLego yakafanana nechero ipi, asi tinenge tichitaura chokwadi chehafu. Kune rimwe divi, isu tine chiito chinogona kufanana nemimwe mitambo, asi Lego akakwanisa kuchipa mweya wakasiyana, dzimwe nguva nekubata kwekuseka, izvo zvinoita kuti tirege kutarisisa kushomeka kwakajairika kwemutambo wema mobile phones.
The Force Inomutsa: ichangoburwa episode yeLego Star Wars inosvika paApp Store
Sezvatinoverenga muApp Store, iyo Lego vhezheni yeThe Force Awakens inosanganisira nyowani mitambo yemakanika iyo yanga isingawanikwe mune mamwe mazita eLego, senge kuvaka michina uchishandisa dzakasiyana siyana. Izvi zvinowedzera chirahwe-senge chinhu kuchinyorwa chekupedzisira, asi mhando yemapuzzle ayo anoita kuti titarise zvimwe zvinhu kuti tikwanise kuenda padanho rinotevera, sekufambisa kana kugadzira zvinhu kuitira kuti zvishandise mashini.
Lego Star Wars: Simba Rinomutsa ndeye yemahara mutambo nekutenga kwakabatanidzwa, zvinoreva kuti chero isu tichaganhurirwa kana isu tinogona kubhadhara kuti tifambe nekukurumidza. Inorema kupfuura 1GB uye ndinofunga zvakakodzera kuedza. Ndakazviita kuti ndikwanise kunyora chinyorwa ichi uye ndinofunga ndichazotamba futi gare gare. Kana iwe wakada iyo yekupedzisira bhaisikopo, usarasikirwa nayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Lego Star Wars iyo Force Inomutsa inouya kuApp chitoro
Kutanga kubvarura kweNzeve Pods ine Mheni tambo